10/07/2018 - Page 4 sur 4 -
10/07/2018 admintriatra 0
Nampitsangam-bolo ny fahenoana ny fanamarihana nentin’ny Dr Lafy Roger Razafindrakoto, tale eo anivon’ny antokon-draharaha Nasionaly misahana ny toeram-pitsaboana eo anivon’ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka, fa misy amin’ireny klinika tsy miankina na toeram-pitsaboana tsy miankina eto amintsika ireny …Tohiny
Eric Fou Hehy : Efa lasa any Inde hiatrika ny fandidiana azy
Ny erikerika nahatondra-drano. Na teo aza ny fahasahiranana, efa lasa any Inde hiatrika ny fandidiana azy i Eric Fou Hehy. Ny aretin’ny voa, raha tsiahivina no nahavoa azy, ary tsy maitsy ny fanoloana azy no …Tohiny
Nambaran’ny filohan’ny HCC na ny fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana fa misy ireo olona izay voalazan’ny lalàna fa tokony hanatanteraka ny fanambaram-pananana, saingy minia tsy mahafantatra izany izy ireo, tamin’ ny teny somary mahery moa …Tohiny
Vola mitentina 155 lavitrisa Ariary anatin’ ny kitam-bolam-panjakana no efa navoaka hamaliana ny fitakian’ ny mpampianatra , dia mbola manohy hatrany ny fitakiany ihany izy ireo ary hita izany omaly tetsy Antanimbarinandriana. Mazava ny nambaran’ …Tohiny
Vokatry ny fiaraha-miasa amin’ny seranam-piaramanidina ao Saint-Pierre- Pierrefont sy ny Aéroport de Madagascar (Adema). Feno ny fenitra amin’ny ahafahan’ny seranam-piaramanidin’i Maroantsetra mandray fiaramanidina. Hiverina indray manomboka ny alahady ho avy izao araka izany ny fitaterana ...Tohiny